နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၁၀) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၁၀)	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Article, Experience, Nargis.	Tagged: Experience, Nargis.	နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (၁၀)
ပစ္စည်းတွေ ကျောင်းရှေ့မှာပုံ၊ ဝေကြဖို့ လုပ်။ ကျနော်က ယူလာတဲ့ ဆေးအိတ်ကလေးဆွဲပြီး ရွာထဲဝင်။ ဆေးအိတ်ဆိုလို့ အထင်မကြီးကြပါနှင့်ဦး။ ဆေးတွေထည့်ထားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကလေးသာဖြစ်ပါသည်။ ဖျားနာနေသူ၊ ထိခိုက်ရှနာရသူတွေကို ဆေးဝေပေးသည်။ ကျနော့်ကို ဆရာဝန်ထင်၍ အူယားဖားယား လာခေါ်သူလည်းရှိရာ မဟုတ်ကြောင်း မနည်းရှင်းပြရသည်။ ဂရုဏာလည်း သက်မိသည်။ ပိုသည့်ဆေးများကို အမျိုးအမည်ခွဲခြားပြပြီး ဦးဇင်းတစ်ပါးထံအပ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဝေရာ စနစ်တကျတော့ရှိသည်ဟု ချီးကျူးမိသည်။ ကျောင်းထိုင်ကိုယ်တော်နှင့် စာသင်ဖက် ကိုယ်တော်က မန္တလေးက ဆင်းလာပြီး စီမံပေးနေသည်။ ရွာရှိ အသက်ရှင်ကျန်သော လူစာရင်းကို ပြုစုထားပြီး ယင်းစာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ပစ္စည်းဝေသည်။ ဆန်၊ ရေသန့်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ အ၀တ်အစားမျိုးစုံ။ နာဂစ်အပြီး ဘယ်သူတွေ ကူဖို့လာသလဲဆိုတော့ ခရိုင်မှူးဆိုတာ ဆင်းလာတယ်တဲ့၊ ကူစရာတော့ ဘာမှ မသယ်လာပါတဲ့။ အခြေအနေလာကြည့်တာတဲ့။ သူတို့ ပြန်သွားပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ ရေတွေသယ်လာတဲ့ ကြက်ခြေနီစက်လှေရောက်လာပါသည်တဲ့။
ဘုန်ကြီးကျောင်းပြန်ရောက်တော့ ကျောင်းပေါ်တက်ကြည့်သည်။ ရွာသားနှစ်ယောက်က အစ်ကိုလာ ဟုဆိုကာကျောင်းအပေါ်ထပ်ပြတင်းပေါက်ကနေ ညွှန်ပြသည်။ အုန်းပင် ကျို့တို့ကျဲတဲ နှင့် အိမ်ပြိုတစ်လုံးမြင်ရသည်။ `အဲဒါ ရွာတောင်ပိုင်းပဲ၊ တစ်ရွာလုံးမှာ အဲဒီအိမ်ကြီးတစ်လုံးပဲ ကျန်တယ်။ အကုန်ပါသွားတာ´ဟု ရှင်းပြသည်။ အမှန်ပင် ရွာဟု ပြာရန်ပင် ခက်နေသည်။ `လူသေတာ သစ်ပင်ပိ၊ အိမ်ပိလို့လား´ ဟု ကျနော်က မေးကြည့်သည်။ ရွာသားနှစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ပြူးကြောင်ကြောင် ပြန်ကြည့်ပြီး `မဟုတ်ဘူးဗျ။ တစ်ရွာလုံးကျွတ်ပြီး မုန်တိုင်းနဲ့ပါသွားတာ´ဟု ဆိုသည်။ ရွာလုံးကျွတ်ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မည်။ `သူ့မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးတွေမှာ သူတစ်ယောက်ပဲ ကျန်တယ်။ သူ့မိန်းမနဲ့ သားနှစ်ယောက် ပါသွားတယ်´ ဟု ရွာသားတစ်ယောက်က နံဘေးမှ ခပ်ရွယ်ရွယ်လူကို ပုတ်ပြပြီးပြောသည်။ `သူက အဲဒီတောင်ပိုင်းကလေ´ဟု ဆက်ရှင်းပြသည်။ ထိုလူရွယ်မှာ အသက် ၂၅၊ ၂၆ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပုံရသည်။ မျက်နှာမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့၊ အူကြောင်ကြောင် မျက်နှာမျိုး ဖြစ်သည်။ အခုဘယ်မှာနေလဲ မေးကြည့်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတဲ့။ `ကျနော်ကတော်သေးတယ်။ ယောက်ျားမို့လို့။ နောက်မိသားစုတစ်စုဆို မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ ကျန်တယ်။ ပိုဆိုးတယ်။´ဟု သူက ပြောနေသေးသည်။ ထိုအမျိုးသမီးမှာ တခြားရွာက ဆွေမျိုးတွေဆီ ထွက်သွားပြီဟုဆိုသည်။ `အစ်ကို အိမ်လည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့´
သူ့မျက်နှာမှာ အဓိပ္ပာယ်ဆိုသည်ကို ရှာမရတော့ပါ။ သူ့လက်ကို ဆွဲပြီး ငွေနှစ်ထောင် ထည့်ပေးတော့ မယူပါဘူးဟု ငြင်းသည်။ ကျနော်လည်း လက်ဖက်ရည်ဖို့လို့ ပြောရမလား၊ အလှူလို့ ပြောရမလား ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ် အကြံရပြီး အစ်ကိုတွေရှိတဲ့ ရွာဆီသွားရင် လမ်းစရိတ်ပေါ့ဟု ဆိုကာ အတင်းထည့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရေတက်ရင် မောင်းရခက်တယ်ဟု လှေဆရာလောဆော်၍ ပြန်ကြဖို့ နိုးဆော်ရသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝတွင် တချို့က ဖိနပ်ချွတ်ထားခဲ့ရာ ကလေးတွေက စောင့်ပေးသည်။ ပြန်အထွက်မှာ ထိုကလေးတွေအတွက် အ၀တ်တချို့ဖယ်ထားပြီး ဝေပေးသည်။ လှေဆရာနှင့် လှေသမားတွေ အတွက် အ၀တ်တချို့ပေးတော့ ပျော်နေကြသည်။ အပြန်မိုးရွာသည်။ ဒုက္ခသည်တွေ သောက်ရရမှာမို့ မိုးရွာတာ ဒီတစ်ခါ ပျော်မိသည်။ လှေဆိပ်အ၀င်မြစ်ဝရှိ စက်လှေခေါင်မိုးပေါ်တွင် စက်သေနတ်ကိုင်ထားသော စစ်သားတစ်ယောက် ပင်လယ်ဝဘက်မျှော်ငေးနေတာ တွေ့ရသည်။ သင်ကာ
← သဘာဝကပ်ဘေးအလွန်နှင့် ကလေးများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာ	ကိုဇော်တူးသို့ အမှတ်တရ →	Pages	about